A Nightmare on Elm Street Collection – Channel Myanmar
Freddy’s Dead: The Final Nightmare (1991) Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) တစ် နှစ်... ဖရက်ဒီ မင်းဆီလာတဲ့အဖြစ် သုံး လေး... မဝင်နိုင်အောင် တံခါးပိတ်ပေး ငါး ခြောက်... လက်ဝါးကပ်တိုင် ပြေးပြီးကောက် ခုနှစ် ရှစ်... ညနက်တဲ့ထိ မအိပ်ဖြစ် ကိုး တစ်ဆယ်... မအိပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကွယ်ဒီကဗျာလေးကို ကောင်မလေးတစ်သိုက် ကြိုးခုန်ရင်း ဆိုနေကြပြီဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကနေ နိုးထဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါ။ Freddy ရဲ့ Razor Gloves (လက်အိတ်ဓား) ကတော့ သွေးဆာနေပါပြီ။ မကြာခင်မှာ မိတ်ဆွေရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကနေ ထာဝရ နိုးထလာခွင့်မရှိတော့တဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီး ရောက်လာတော့မှာ မလို့ပါ။အခု Part5Freddy's Dead: The Final Nightmare ဇာတ်ကားမှာတော့ Freddy ကို Supernatural Spiritual Murderer (သဘာဝလွန် ဝိညာဉ်လူသတ်သမားကြီး) အဖြစ် ဘယ်အရာတွေက ပုံသွင်းခဲ့တယ် ဆိုတာကို သိရှိရပါတော့မယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ ...
A Nightmare on Elm Street: The Dream Child (1989) A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989) IMDB - 5.1/10ဝိညာဉ်လူသတ်ကောင်ကြီး Fred Krueger ရဲ့ ငါးကားမြောက် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Elm လမ်းပေါ်က အတွဲလိုက် လူသတ်မှုတွေကို ကြည့်ရှုရပါလိမ့်ဦးမယ်။ Part4The Dream Master မှာ Alice က အသတ်ခံလိုက်ရသူများရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဆက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်သခင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Alice ဟာ Freddy ကို အသာစီး ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပြီး သူ့ကို အိပ်မက်ဆိုးကမ္ဘာထဲမှာ ထာဝရ သော့ခတ်ပိတ်ထားခဲ့တာပါ။အခု Part5မှာတော့ Alice တို့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်း အောင်လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပွဲကနေ အစပြုပြီး ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ Freddy ကို ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာ Alice နဲ့ Dan နှစ်ယောက်ပဲ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ...
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) IMDB - 5.7/10, Meta - 56%ဒီကားကတော့ Freddy ရဲ့ လေးကားမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Part3ဇာတ်ကားမှာ အပြစ်ဖြေ မြှုပ်နှံ သင်္ဂြိုလ်ခြင်းခံလိုက်ရလို့ Freddy ရဲ့ဝိညာဉ်ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပေမယ့် Kerstin ရဲ့အိပ်မက်စွမ်းအားနဲ့ စွဲလမ်းမှုတွေကြောင့် Freddy တစ်ယောက် Elm လမ်းပေါ် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။Part3ဇာတ်ကားက ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ ကလေးသုံးယောက်ကို တစ်ယောက်ချင်း လိုက်ရှင်းနေစဉ်မှာ Kerstin တစ်ယောက် မကာကွယ် မကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး သူ့အလှည့်ကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ မတော်တဆ Alice ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို အိပ်မက်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်မိရာကစပြီး Freddy တစ်ယောက် ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ကလေးအသစ်တွေရဲ့ သွေးနံ့ကို ယစ်မူးသွားခဲ့ပါပြီ။Alice ...
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987) A Nightmare on Elm Street 3: Dream Worriors (1987)IMDB - 6.6/10, Rotten Tomatoes - 72%Freddy က Jesses နဲ့ Lisa တို့ကို စိတ်ကြိုက်ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ Part2ဇာတ်ကားမှာတော့ ဇာတ်လမ်းက ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။အခု Part3မှာတော့ Freddy ဟာ စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံတစ်ခုမှာ လှည့်လည်သောင်းကျန်းနေပါတော့တယ်။ Elm Street ပေါ်က ကလေးတွေဟာ Freddy ကိုကြောက်ရွံ့ပြီး မအိပ်ရဲတော့ဘဲ ကြောင်တောင်တောင်တွေဖြစ်လာလို့ စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အလုပ်သင် စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်မလေးက Part 1 ကားမှာ Freddy ကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ Nancy ဖြစ်နေပါတယ်။Nancy က ...
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy’s Revenge (1985) A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge (1985)=========================Rotten Tomatoes… 41%IMDb… 5.5CM ပရိတ်သတ်တွေ holloween ကာလမှာ ကြည့်ဖို့ 1984 ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့A Nightmare on Elm Street ရဲ့ အဆက်ကားလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမကားမှာ Freddy တစ်ယောက် Nancy ရဲ့ ထင်မထားတဲ့တိုက်ကွက်ကြောင့် ပြင်ပကမ္ဘာထဲကို ရောက်ရှိလာပါတယ်အဲဒီနောက်မှာ Nancy ရဲ့ ထောင်ချောက်တွေကြားထဲမှာ အခက်အခဲတွေကြုံရပြီး သူလိုချင်တဲ့ Nancy ကိုရမသွားပါဘူးသူ့ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ Nancy ရဲ့အမေကိုပဲ ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီအဖြစ်တွေအပြီး ငါးနှစ်အကြာမှာ အဲဒီအိမ်ကို ပြောင်းလာတဲ့ Jesse ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအသုံးချပြီး Freddy ဟာ သူ့ရဲ့ညတွေကို အသက်သွင်းဖို့ ပြန်ကြိုးစားပါတော့တယ်Elm လမ်းပေါ်မှာ Freddy တစ်ယောက် ဘယ်လို လက်သည်းစွမ်းပြမလဲJesse ကိုရော သူ့ရဲ့ကောင်မလေး ...
A Nightmare on Elm Street (1984) A Nightmare on Elm Street (1984) =========================Rotten Tomatoes… 94%IMDb… 7.5ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖူးကောင်း ကြည့်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။အိပ်မက်ထဲမှာ လူလိုက်သတ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီး Freddy လေ။လက်သည်းမှာ ဓားအချွန်တွေနဲ့လေ။ကြည့်ပြီးညမအိပ်ရဲကြတော့ဘူးလေ။မှတ်မိတယ်မလား ?သင်အိပ်လိုက်တာနဲ့ကို သင့်ကိုအိပ်မက်ဆိုးတွေပေးပြီးလိုက်သတ်နေတဲ့ကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိရင်ဘယ်နှယ့်​လုပ်မလဲ။နိုးထလာတာနဲ့ သင်ပြန်အိပ်ဖို့ကိုကြောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်အိပ်ရဲမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။မအိပ်ရတာ ရက်တွေဆက်လာတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာလေမလဲ ?မအိပ်ရတဲ့ ရောဂါကို လူတိုင်းလိုလိုကြုံဖူးကြမှာပါ။အရမ်းခံရခက်တယ်။ ခေါင်းတွေမူးလာမယ်။စိတ်တွေခြောက်ခြားလာမယ်။မူမမှန်​ဖြစ်​လာမယ်​။အဲ့ဒီအခါ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ ?ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း =============Freddy Krueger ဟာ လူငယ်လေးတွေကိုအိပ်မက်ဆိုးတွေပေးပြီး အိပ်မက်ထဲမှာလူလိုက်သတ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်စီ တို့သူငယ်ချင်းတစ်စုကိုFreddy Krueger မှ အိပ်မက်တွေပေးပြီးလိုက်သတ်တဲ့အခါမှာတော့…. ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်မင်းသားကြီးJohnny Depp သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်တာမို့သူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်လေးကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်လည်း အိပ်မက်လှလှမက်ကြပါစေ။ (ရုပ်ရှင်အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ Chan Myae Kyaw ဖြစ်ပါတယ်။) File size…(1.6 GB) and (970 MB) Quality…BluRay 1080p and 720p Format…mp4 Duration….01:41:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya AungTranslated by Chan Myae Kyaw
Freddy vs. Jason (2003) Freddy vs. Jason (2003) IMDb - 5.7/10_____Rotten - 41% အကယ်၍ မင်းဟာ Elm Street လမ်းမတွေထက်မှာ one, two Freddy's Coming For you three, Four Better Lock the Door …… ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကြားလိုက်ပြီ ဆိုရင် သေချာတယ် မင်းရဲ့ အဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးကနေ မြန်မြန် နိုးထဖို့ လိုနေပါပြီ ဘာ့လို့လဲ ဆိုတော့ မင်း ဆက်ပြီး အိပ်စက်နေဦးမယ်ဆိုရင် Freddy Krueger ဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးက မင်းကို ထာဝရ မနိုးသောအိပ်စက်ခြင်းတွေဆီကို ရက်ရက်စက်စက် ပို့ဆောင်ပေးတော့မှာမလို့ပါပဲ အလားတူပဲ Crystal Lake မြို့လေးရဲ့ စခန်းချအနားယူအပန်းဖြေရာ Camp Crystal Lake မှာ ………… Chi Chi Chi Hah Hah Hah Chi Chi Chi Hah Hah Hah ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်မယ် ဆိုရင်ရော………?? လှည့်ကြည့်မနေပါနဲ့ ပြေးသာ ပြေးပါတော့ Jason ဆိုတဲ့ ...